Back Track တွင် မြန်မာ font ထည့်သွင်းနည်း | Myanmar Black Hacking
0 Back Track တွင် မြန်မာ font ထည့်သွင်းနည်း
Myanmar Font Installation File ကို အရင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ ...ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးရလာသော zawgyi_keyboard-0.3.3.tar.gz ဖိုင်ကို Desktop ပေါ်သို့ကူးယူလိုက်ပါ .... Compress လုပ်ထားတဲ့အတွက် ဖိုင်ကို အရင်ဦးဆုံး ဖြေရပါမယ် ...
Terminal ကိုဖွင့်ပြီး File Location ရှိရာသို့သွား၇န် cd Desktop ရိုက်ပါ ...Compress ဖိုင်ကိုဖြေချရန်အတွက် tar -xzvf zawgyi_keyboard-0.3.3.tar.gz ဟုရိုက်ပါ ...
Desktop ပေါ်မှာ Zawgyi ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Folder တစ်ခုပေါ်လာပါမယ် .. ဒီ Folder ထဲ ကို cd zawgyi ဆိုတဲ့ Command ရိုက်ပြီး ထပ်ဝင်ပါမယ် .. Zawgyi Folder ထဲက Installation ဖိုင်ကို ရှာရန်အတွက် ls ကို ရိုက်ပါ
zawgyi_keyboard.py ဆိုတဲ့ ဖိုင်နဲ့ Install လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် python zawgyi_keyboard.py ကို ရိုက်ပါ ...
You are about to press...
[i] install, [r] remove, [h] layout help, [u] man upgrade,
[o] online upgrade, [s] show font, [q] exit
ဒီလိုပေါ်လာပါမယ် ... Install လုပ်ချင်တဲ့အတွက် i ကိုနှိပ်ပြီး Enter ခေါက်ပါမယ် .. Successfully Installed ဖြစ်ပြီးနောက် q ကို ရိုက် Enter ခေါက်ပြီး Installation က ထွက်လိုက်ပါ ....ဒီအဆင့်ပြီးရင် Myanmar Keyboard ရပါပြီ ...
Myanmar Keyboard ကို သုံးဖို့ရန်အတွက် ...
System--->Preferences---->Keyboard ကိုသွားပါ " Layout" Tab အောက်မှာ ရှိတဲ့
Add ထဲက မှ By Country မှာ Myanmar ကိုလိုက်ရှာပြီးရွေးပေးလိုက်ပါ ... ဒါဆိုရင် Myanmar Font ရော Keyboard ရော သုံးလို့ရပါပြီ ...
Windows မှာဆိုရင် Myanmar to english (or) English to myanmar ချိန်းဖို့အတွက် Shift+Ctrl ဘဲသုံးခဲ့ကြတဲ့အတွက် Back Track မှာလည်း Keyboard Layout ကို ချိန်းရန်အတွက် ...
System--->Preferences---->Keyboard ကိုသွားပါ " Layout" Tab အောက်မှာ ရှိတဲ့ Option ထဲက Keys to change layouts ဆိုတဲ့ကောင်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ...Shift +Ctrl တစ်ခုဘဲအမှန်ခြစ်ပြီးကျန်တာတွေအားလုံး အမှန်ခြစ်ဖျောက်ထားပါ ...
Labels: Backtrack . Hacking Tutorials . Knowledge